5 ဥရောပမှာတော့အကောင်းဆုံးဆောင်းရာသီဦးတည်ရာနေရာများ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား >5ဥရောပမှာတော့အကောင်းဆုံးဆောင်းရာသီဦးတည်ရာနေရာများ
ဥရောပကမ္ဘာပေါ်မှာမည်သည့်တည်နေရာနှင့်မတူဘဲဖြစ်ကြောင်းချမ်းလအတွင်းအခြို့ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလကျက်သရေရှိပါတယ်. အမျိုးမျိုးတွေအများကြီးရှိပါတယ်, နှင့်မျှမတို့နှစ်ဦးကိုထိုအရပ်တို့၌တူညီသောခံစားချက်နှင့်လေထုရှိ. တကယ်တော့, များစွာသောလူချမ်းလအတွင်းမြို့ရွာနှင့်မြို့ကြီးများတစ်ဦးမှခရီးသွားနဲ့တူခံစားမိကြောင်းပြောပါ အသစ်ကဦးတည်ရာကို. ဆောင်းရာသီလုံးဝဥရောပအသွင်ပြောင်းဖို့စိတ်ကူးနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်, နှင့်အလှည့်အတွက်, တစ်နှစ်တာ၏အခြားအချိန်များတွင်သူတို့မတွေ့ကြုံနိုင်သောဧည့်သည်များအတွက်လုံးဝအတွေ့အကြုံသစ်ကိုဖန်တီးပါ. အဆိုပါကျသွားဆီးနှင်းကရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလလှုပ်ရှားမှုများနှင့်အရာခပ်သိမ်းအလွန်ပွဲလမ်းသဘင်စေအရေးကြီးသောအားလပ်ရက်တွေအများကြီးဆောင်တတ်၏. အပြောင်းအလဲများနှင့်အလှအပ၏စည်းစိမ်နေသော်လည်း, အရာအားလုံးသွားရောက်လည်ပတ်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးက. မင်းလိုချင်တယ်ဆိုရင် ခရီးသွားရန် လူကြိုက်အများဆုံးခရီးသွားအစက်အပြောက်အချို့, ဤအသွားရောက်လည်ပတ်5ဥရောပ၌ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလနေရာများ.
ရထားလမ်းပို့ဆောင်ရေးခရီးသွားမှအများဆုံးပတ်ဝန်းကျင်နဲ့သဟဇာတနည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်. ဤဆောင်းပါးသည်ရထားခရီးသွားအကြောင်းကိုပညာပေးရန်စာဖြင့်ရေးသားခဲ့သဖြင့်ကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည် ကမ်ဘာပျေါတှငျစျေးအချိုဆုံးရထားလက်မှတ်တွေဝဘ်ဆိုဒ်တစ်ဦးကရထား Save.
1. ဥရောပမှာတော့ဆောင်းရာသီဦးတည်ရာနေရာများ: ဘူဒါပက်, ဟန်ဂေရီ
သင်အလွန်အံ့သြစေပါလိမ့်မယ်တဲ့ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလ Wonderland ရှာနေနေတယ်ဆိုရင်, ထို့နောက်ဘူဒါပက်ထက်မထပ်မံကြည့်ရှု. ဒါဟာဆောင်းကာလကိုအဘို့အပြီးပြည့်စုံသောမြို့ဖြစ်၏ထွက်ပြေးဖို့. အများအပြားဘူဒါပက်တတ်နိုင်နှုန်းထားများဖြစ်ပါတယ်ရှေးခယျြသောအဓိကအကြောင်းအရင်းတစ်ခုမှာ. သင်တစ်ဦးတတ်နိုင်မှုနှုန်းများအတွက်ချစ်စရာကောင်းတဲ့မြို့တွေ့ကြုံခံစားရ. ဘူဒါပက်ခရီးသွားဧည့်များ၏အများအားဖြင့်ပြည့်ဝ၏ နွေရာသီကာလအတွင်း. သို့သျောလညျး, ဆောင်းတွင်းကာလအတွင်း, သငျသညျအနည်းဆုံးလူအစုအဝေးနှင့်အတူမြို့ရဲ့အလှတရားကိုတွေ့မြင်ရ. အပြင်ကနေ, သငျသညျမီးဖိုထဲကကိတ်မုန့်နှင့်အရသာရှိတဲ့စပျစ်ရည်ကိုအများကြီးရ.
တစ်ဦးအပိုဆောင်းဆုကြေးငွေကတော့ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်မာဂရက်ကျွန်းဖြစ်ပါတယ်. ဒါဟာဖြစ်ပါသည် စုံလင်သောအရပျ သငျသညျတခုမော်ကွန်း snowball ရန်ပွဲရှိသည်ဖို့လိုလျှင်သွားရောက်. ဒေသခံများနှင့်ခရီးသွားဧည့်များ၏တစ်ဦးကအများကြီးမိမိတို့၏မိတ်ဆွေများကိုအတူစုဝေးနှင့်မိုဃ်းပွင့်ကိုခံစား. snowball တိုက်ပွဲတွေလည်းသင်တို့အဘို့မဟုတ်ခဲ့လျှင်, ထို့နောက်တစ်ဦးရဲတိုက်များ၏ရှေ့မှောက်၌စကိတ်စီးပျော်မွေ့! ဘူဒါပက်မြို့ ပန်းခြံဆောင်းတွင်းကာလအတွင်းရေခဲစီးစကိတ်ကွင်းဖြစ်လာ. သငျသညျမိုဃ်းပွင့်ကစားပြီးအောင်ပြီးတာနဲ့, သင်ဗတ်ပေါ်ရွှေ့နိုင်ပါတယ်. အဆိုပါအံ့သြဖွယ် Gellert spa တက်နွေးနှင့်အချို့သောအပူရေကိုခံစားရန်နေရာကောင်းတခုဖြစ်ပါတယ်.
2. ဗင်းနစ်, အီတလီ
သငျသညျဥရောပဆောင်းရာသီစိတ်ကူးသည့်အခါဗင်းနစ်စိတ်ကိုလာရန်ပထမဦးဆုံးအရာမဖြစ်စေခြင်းငှါ,. သို့သျောလညျး, သငျသညျဆောငျးတှငျးစဉ်အတွင်းတူးမြောင်း၏မြို့သွားရောက်လျှင်, သငျသညျအစဉျအမွဲကမှတ်မိပါလိမ့်မယ်. အဆိုပါစည်ကားလမ်းများနှင့်ဆူညံကဖေးချ toned နေကြတယ်, သငျတို့သနွေရာသီမပြနိုင်သည်ကိုမြို့သူမြို့သားတစ်ဦးအခြမ်းကိုတွေ့မြင်. နွေရာသီလများအပေါငျးတို့သ Hustle နှင့်ပျားပန်းခပ်လှုပ်ရှားနေတဲ့ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလအပန်းဖြေလမ်းလျှောက်ပြီးပြည့်စုံစေတဲ့တည်ငြိမ်အေးချမ်းလေထုနဲ့အစားထိုးနေသည်. သို့သျောလညျး, ဒါကြောင့်အခါမြို့သူမြို့သားအလွန်လျင်မြန်စွာဘဝမှကြွလာသည်ဟုမှတ်စုမရှိမဖြစ်အရေးပါသည် ဗင်းနစ်ပွဲတော်ကြီး ပတ်ပတ်လည်လိပ်. တိုင်းဖေဖော်ဝါရီလ, မြို့သူမြို့သားဧည့်သည်တစ်ဦးမြင့်တက်ရရှိသွားတဲ့, နှင့်မရနိုင်ပါဘူးမျက်နှာဖုံးများမြို့များ၏လမ်းများရေလွှမ်း. အသက်ရှင်ခြင်းမြို့တော်ရဲ့ရောင်စုံသမိုင်းကိုဆောင် ခဲ့. လမ်းများပေါ်ရှိ Creative ဝတ်စုံနှင့်သိပ်ပြီးမ. သင်ဘယ်တော့မှမေ့လိမ့်မယ်တဲ့သွက်ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလလိုပါက, သင့်ရဲ့စာရင်းထဲမှာဗင်းနစ်ထား.
3. ဥရောပမှာတော့ဆောင်းရာသီဦးတည်ရာနေရာများ: ပဲရစ်, ပြင်သစ်
ပြင်သစ်အရသာအစားအစာနှင့်ရင်ခုန်စရာလူတန်းစားပေါင်းစုံနှင့်အတူလူများ၏အများစုဆက်စပ်. သို့သျောလညျး, တိုင်းပြည် ပို. ပင်ချစ်စရာကောင်းသည့်အခါရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလလိပ်ပတ်လည်မှာဖြစ်လာ, အထူးသဖြင့်မြို့တော်. ပဲရစ်သင်သည်ထိုခရီးယခုနှစ်ဘယျအခြိနျနေပါစေ stunning ဖြစ်ပါတယ်. ကံမကောင်းသဖြင့်, များသောလူများအေးရာသီကာလအတွင်းကတွေ့ကြုံခံစားရ. ပဲရစ်, မေတ္တာနှင့်အချစ်ဇာတ်လမ်း၏မြို့, သင်တစ်ဦးနွေးဂျာကင်အင်္ကျီနှင့်အခြားရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလဝတ်စုံများဝတ်ဆင်စိတ်ထဲမထားပါဘူးလျှင်သင်၌မွေ့လျော်ခြင်းနှင့်အထင်ကြီးဖို့သေချာဖြစ်ပါသည်. အဆိုပါပွဲတော်ရာသီဘဝမှပဲရစ်ဆောင်တတ်၏. ဧည့်သည်များသာအလိုလိုကျလှနျးခွငျးတှငျမရနိုငျ အရသာအစားအစာ နှင့်စပျစ်ရည်ပွဲတော်များ. သို့သျောလညျး, ဒါကြောင့်လည်းတူ၏ဖြစ်ရပ်များကိုကြည့်ပါရန်စုံလင်သောအချိန်ဖြစ်ပါသည် မူဆယ် des ဝိဇ္ဇာပွဲခင်းမှာအံ့သြဖွယ်အဆိုပါပွဲတော် ပြီးနောက် အဆိုပါ Jardin des စက်ရုံမှာအလင်းအိမ်ပွဲတော်.
မြို့သူမြို့သားစျေးကွက် Explore နှင့် အလှဆင်လမ်းများ, သင်မြို့ရဲ့အလှအပအတွက်ယူနေစဉ်. ဆောင်းရာသီဟာစိန်ဘဏ်များတစ်လျှောက်လမ်းလျှောက်ယူပြီးပြည့်စုံသောအချိန်ဖြစ်ပါသည်သို့မဟုတ်က Le Marais ၏လမ်းများအတွက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရရ. သငျသညျသိမြင်ပြီးတာနဲ့, သင်တစ်ဦး Parisian ကဖီးသို့ pop နှင့်ကောင်းတစ်သောက်စရာခံစားနိုငျ. ကြောင်းပြုပြီးတာနဲ့, သငျသညျနည်းပါးလာလိုင်းများနှင့်အတူပဲရစ်အားလုံးကိုအဓိကဆွဲဆောင်မှုတွေ့နိုင်ပါသည်.
4. ဗီယင်နာ, သြစတြီးယား
ခရီးသွားဧည့်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏သြစတြီးယားဖို့အားလုံးကိုတစ်နှစ်ပတ်လုံးစုပြုံပေမယ့်, တစ်ဦးအထူးသဖြင့်ရှိပါတယ် ရေးတဲ့နတ်သမီးပုံပြင်ခံစား ဆောင်းတွင်းကာလအတွင်း. တိုင်းပြည်အတွက်အားလုံးမြို့ရွာနှင့်မြို့ကြီးများအတော်လေးထူးခြားတဲ့ကြောင်းတစ်ခုဝိဇ္ဇာအတတ်အားခံစားကြ. သိသာထင်ရှားသောနှင်းနိုဝင်ဘာလကနေမတ်လဖို့များသောအားဖြင့်ရှိပါတယ်. နှင်းကျချစ်သူများသြစတြီးယားဆောင်းရာသီကိုးကွယ်ဖို့သေချာသောဤနည်းလမ်းများ. သငျသညျတခုသြစတြီးယားရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလ၏အနှစ်သာရကိုခံစားချင်တယ်ဆိုရင်, ဗီယင်နာသွားရောက်ကြည့်ရှု. ဤသည်ကြီးကျယ်သောမြို့တော်က၎င်း၏ပွဲလမ်းသဘင်ဝိညာဉ်ဝိသေသခါးပန်းကိုအဘို့အကျော်ကြား. သငျသညျအခြို့သောအချိန်သည်ဆောင်းကာလစျေးဝယ်များအတွက်စိတ်ဓါတ်များမှာရောက်နေတယ်ဆိုရင်, အဆိုပါသွားရောက်လည်ပတ်ဖို့သေချာပါစေ ခရစ္စမတ်စျေးကွက်. ဗီယင်နာဥရောပတစ်ခုလုံးအတွက်လူကြိုက်အများဆုံးစျေးကွက်အချို့ကိုရှိပါတယ်. ဧည့်သည်အရသာသြစတြီးယားအစားအစာကိုခံစားခြင်းနှင့်အချို့တွေးတောဆင်ခွင်တာတွေစပျစ်ရည်ကိုသောက်ရ. အပြင်ကနေ, အမျိုးမျိုးသောလက်ဖြစ်ပစ္စည်းများနှင့်အရသာရှိပါတယ် ချောကလက်ရယူထားသော.
5. ဥရောပမှာတော့ဆောင်းရာသီဦးတည်ရာနေရာများ: Interlaken, ဆွစ်ဇာလန်
သငျသညျဆောငျးတှငျးအားလပ်ရက်များအတွက်မွို့၌အချိန်ဖြုန်းစိတ်ကူးမရနိုငျသောလုပ်ဆောင်ချက်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်မည်ဆိုလျှင်, ထိုအခါ Interlaken ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၌သင်တို့အဘို့အဆောင်းတွင်းလိုရာခရီးဖြစ်ပါသည်. လူကြိုက်များမတူဘဲ, ကြီးမားတဲ့မြို့နေရာများ, Interlaken သည့်အဲလ်ပ်တောင်တန်းအနီးအပန်းဖြေစခန်းမြို့ဖြစ်ပြီး. skiers နှင့်နှင်းလျောစီးထောင်ပေါင်းများစွာ၏အဆိုပါမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ရှုခင်းအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှကိုဆောင်းတွင်းနှင့်လုပ်အသုံးပြုခြင်းကိုထိုဒေသတွင်ကမ်းလှမ်းမှု Interlaken ၎င်းတို့၏လမ်းအောင်. Interlaken နှစ်ဦးစလုံးကမ္ဘာရဲ့အကောင်းဆုံးရှိပါတယ်. ပထမဦးစွာ, နီးကပ်နှင့်အံ့သြဖွယ်သောတောင်ပေါ်လှုပ်ရှားမှုများမှအဆင်ပြေ access ကို. ဒုတိယအ, ကအဆောက်အဦမှကြွလာသောအခါသူကတဦးတည်းချင်နိုင်အရာအားလုံးကမ်းလှမ်း. သငျသညျအလငျးကိုပျော်စရာမွေ့လျော်ခြင်းရှိမရှိ, သို့မဟုတ်သင်အစွန်းရောက်လမ်းကြောင်းပေါ်တွင်သင်၏န့်အသတ်ကိုစမ်းသပ်ချင်, Interlaken သင်တို့အဘို့ဖြစ်ပါသည်. ပျော်စရာသင့်ရဲ့ idea ကမည်သို့ပင်, သင်ပြန်မြို့ရန်သင့်လမ်းစေနိုင်သည်ကိုသိရန်ဝမ်းမြောက်လိမ့်နှင့်အချို့သောဖွန်ဒူးပျော်မွေ့ပါလိမ့်မယ်.
ဥရောပလူတိုင်းအတွက်တစ်ခုခုရှိပါတယ်. ဒါဟာသင့်ရဲ့ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလကဲ့သို့အရူပနှင့်အသုံးပြုမှု Wonderland အဘယ်အရာကိုဆုံးဖြတ်သင့်အားတက်ဖြစ် တစ်ဦးကရထား Save အဲဒီမှာရဖို့. ဆောင်းရာသီတွင်တွေ့ကြုံစရာများစွာရှိသည်, ဒါကြောင့်စွန့်စားရရှေ့ဆက်တစ်ဦးရဲရင့်ခြေလှမ်းယူ.
လုပ်ချင်တိုင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ပို့စ် “5 ဥရောပမှာတော့ဆောင်းရာသီဦးတည်ရာနေရာများ” သင့်ရဲ့ site ကိုပေါ်ကို? သင်ဟာတစ်ခုခုကိုလုပ်နိုင်အယူကျွန်ုပ်တို့၏ဓါတ်ပုံများနှင့်စာပေးပြီးခရက်ဒစ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ဒီဘလော့ပို့စ်. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fwinter-destinations-europe%2F%3Flang%3Dmy – (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
europetravel trainjourney ရထားအကြံပေးချက်များ travelaustria travelfrance travelitaly travelswitzerland winterdestination winterdestinations ဆောငျးရာသီခရီးသွား